BeeJob Myanmar Freelancing Platform – InfoTech Myanmar
BeeJob Myanmar Freelancing Platform
BeeJob- Myanmar Job Portal
သင်ပြဆရာများမှ အွန်လိုင်းသင်တန်းအမျိုးမျိုးကို လွတ်လပ်စွာ စီမံဖွင့်လှစ်သင်ပြပေးပါသည်။
သင်ယူသူများမှ ၎င်းတို့၏ စိတ်ဝင်စား ဝါသနာပါသော သင်တန်းအမျိုးမျိုးကို သင်ယူကြပါသည်။
Bee Job တွင် ဆေးသုတ်၊ မီးပြင်စသော အနီးအနားအလုပ်များ(local jobs)များမှစ၍ ဒီဇိုင်း၊ အင်ဂျင်နီယာ(Professional Jobs)စသော အလုပ်အမျိုးမျိုးတို့ကို လုပ်ကိုင်ရန် ရှာဖွေနေသော “အလုပ်ရှာနေသူများ” ရှိပါသည်။ အထက်ပါ အလုပ်အမျိုးမျိုးတို့အတွက် လုပ်ကိုင်နိုင်သူများကို ရှာဖွေနေသော “အလုပ်ရှင်များ” ရှိပါသည်။
Bee Job သည် အလုပ်ရှာနေသူများကို အလုပ်များရှာပေးနိုင်၍ လုပ်ကိုင်နိုင်သူများကို ရှာဖွေနေသူများကို ကျွမ်းကျင်လုပ်ကိုင်သူများရှာဖွေပေးနေ၍ အလုပ်ရှင်များ နှင့် အလုပ်ရှာနေသူများ ကို အချင်းချင်း ချိတ်ဆက်၍ အလုပ်များ လုပ်ကိုင်နိုင်သော အွန်လိုင်းအလွတ်တမ်းအလုပ်ပလက်ဖောင်းကြီး ဖြစ်ပါသည်။
မှတ်ချက်။	။ ယခုအခါတွင် အထူး အဆင့်မြင့်တင်မှု၊ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ ရှိနေ၍ ဝင်ရောက်၍ မရနိုင်ပါ။
Feedback From BeeJob Myanmar Freelancing Job Portal Customers
working here to get golden opportunity
beejobmyanmar.com an overall
rating of 4.5 stars
Approve of our CEO
Unlock eternal opportunities with your talents.
BeeJob Myanmar Projects Coming From
Our award-winning culture comes from holding the bar high and our six core values even higher.
BeeJob Myanmar is the best place to find photographers, gardeners, cleaners, couriers & more.BeeJob Myanmar makes it easy.
Never miss your dream Freelancing Job from Singapore again. Find all the Latest Openings Freelancing Jobs From Singapore you’ve been waiting for.
Never miss your dream Freelancing Job from Japan again. Find all the Latest Openings Freelancing Jobs From Japan you’ve been waiting for.
3 Thousand users
grow their opportunities with ITM